कामरेड, चुनाव फेरि आउँछ है ! इमानदार नेता, राम्रो शासन व्यवस्था भयो भने विदेशिएको छोरा फर्कने आसमा ती बूढाबूढीले भोट हालेका हुन् । आफ्नी छोरी जस्तै अरू कसैका छोरी विदेशमा बलात्कृत हुन नपरोस्, कुनै पनि चेलीले विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस्, यस्तै सोचेर ती पीडित बाबुआमाले भोट खसालेका हुन् १५ वैशाख, २०७७ Share
उदयपुरवासीकाे मागः पैसा आफैं तिर्छाैँ, काेराेना परीक्षण गरिदेऊ प्रभावित क्षेत्र भएकाले २१ सयभन्दा बढी नागरिकको परीक्षण तत्कालै गर्नुपर्ने स्थिति रहेको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी बताउँछन् । यद्यपि, अहिलेसम्म साढे ६ सय जनाको मात्र परीक्षण गरिएको छ १५ वैशाख, २०७७ Share
मधेस मामलामा सधैँ असफल ओली राजनीति संविधान बनेदेखि नै मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । तर, ओली उनीहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न कहिल्यै तयार भएनन् १४ वैशाख, २०७७ Share
लकडाउनको मारमा किसान : चिलिया टापुमा १ करोडभन्दा बढीको मकै बिकेन टापुवासी किसानले अघिल्लो वर्ष १ करोडभन्दा बढी मूल्यको मकै बेचेका थिए । त्यतिबेला मकै प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ थियो १४ वैशाख, २०७७ Share
भूकम्पपछिका ५ वर्ष : कहाँ चुक्यो नेपाल ? भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कमजोरीरहित छन् त ? जवाफ त टाढाकै कुरा भयो, सरकारले यस्तो प्रश्न सुन्न पनि मान्दैन । जबकि, अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका नाममा राज्यले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ १२ वैशाख, २०७७ Share
लोकतन्त्र बलियो पार्न कांग्रेसमा सामूहिक नेतृत्व चाहिन्छ अब हामीले सामूहिक तरिकाले नेतृत्व लिनुपर्छ । यसो हुँदा सामूहिक निर्णय लिइन्छ, पारदर्शिता कायम हुन्छ । विवाद, असन्तुष्टि कम हुन्छ । लाेकतन्त्र बलियाे हुन्छ ११ वैशाख, २०७७ Share
ओलीको बेमौसमी अध्यादेश : कहिल्यै नमेटिने कलङ्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सपना बाँडिरहेका छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । राष्ट्रिय एकता, पार्टी–पार्टीबीच मेल नै राजनीतिक स्थिरताको जग हो । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुलुक संकटमा रहेका बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएका छन् १० वैशाख, २०७७ Share
६ दिन ५ रात लगातार हिँडेका युवा भन्छन्–काठमाडौंले चेतायो, अब गाउँमै केही गर्छु (भिडियोसहित) काठमाडौंबाट ६ दिन लगाएर उदयपुर आइपुगेका दुई युवक शनिबार बेलका नगरपालिका-९, रामपुरमा भेटिए । ६ दिनमा जम्मा एक रात मात्र सुतेको बताउने मेगेन्द्र श्रेष्ठ भोजपुरकाे घाेरेटार तथा १८ वर्षीय अमृत बस्नेत सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, बांगेस्थित घर हिँडेका हुन् ७ वैशाख, २०७७ Share
काेराेना संक्रमितले डुलेका स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन्- शंकास्पद क्षेत्र सिल गरेका छौँ (अन्तर्वार्ता) ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा कोरोना संक्रमित १२ भारतीय नागरिक विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट गत फागुनमै नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसअघि वीरगन्जमा भेटिएका संक्रमितसँगै उनीहरू सुनसरी र सप्तरीका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ ६ वैशाख, २०७७ Share
सरकार यति निर्दयी कसरी हुन सक्छ ? लकडाउन कहिलेसम्म चल्छ, टुङ्गो छैन । शहरमा थुनिएका धेरै श्रमिकको कोठामा चुल्हो बल्न छाडिसकेको छ । कतिपयले त राहत पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यस्ताे अवस्थामा उनीहरू सडकमा ननिस्किएर के गरुन् ५ वैशाख, २०७७ Share
विदेशको मासिक डेढ लाख कमाइ त्यागेर गाउँमै कृषि कर्म गाउँ छाडेर कमाउन हिँडेका धेरै नेपाली युवा यतिबेला विदेशी भूमिमा छन् । कोरोना भाइरस (कोविड–१९)को त्रासका बीच गाउँघर र परिवार सम्झिँदै कोठामा थुनिएर बस्नुको विकल्प छैन उनीहरूसँग । जोखिमका बाबजुद कोहीचाहिँ अहिले पनि ड्युटी गरिरहेका छन् ४ वैशाख, २०७७ Share
कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन नबनेसम्म लकडाउन ! नेपालको हकमा लकडाउन हटाउने वा खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने आवाज यहाँ संक्रमणको जोखिम कम भयो भनेर नभई जनजीवन कष्टकर बन्यो भनेर हो २ वैशाख, २०७७ Share
संकटका बेला पनि विपक्षी नेताले विरोधकै राजनीति गरे मलाई दुःख लागेको छ । तर, ती तस्वीर मैले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेको होइन । अरुले नै सेयर गरेका रहेछन् । फेरि मैले ती फोटो अनुमतिविना खिचेको होइन । नगरको वेबसाइटमा राख्नका लागि खिचाइएको तस्वीर थियो १ वैशाख, २०७७ Share
कोरोना भाइरसबारे नेपालीले जान्नैपर्ने तथ्य नेपालजस्तो मुलुकमा त्यसैगरी संक्रमण फैलियो भने अवस्था के होला ? यो प्रश्नमा आमनागरिकलाई राहत महसुस हुने खालको जवाफ सरकारले पनि पक्कै दिन सक्दैन । किनकि, नेपालसँग युरोप, अमेरिकाजस्तो स्रोतसाधन र विशेषज्ञ छैनन १ वैशाख, २०७७ Share
राहत बाँड्दा नेकपाकाे झण्डा देखाइनु लज्जास्पद हाे तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यसमा म आजै हाम्रा पार्टीका साथीहरूसँग कुरा गर्छु । विद्यार्थीहरूको उद्धार तथा राहतका लागि हामी अब खट्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु २८ चैत, २०७६ Share
हैट ! ‘लोभी-पापी’हरू स्थानीय तहमा ‘हुने खाने’लाई पनि राहत बाँड्ने काम भइरहेको छ । भकारीभरी धान भएका परिवारका सदस्य पनि ‘लाजै पचाएर’ राहतमा २० किलो चामल लिनेको लाइनमा बसेका भेटिन्छन् २८ चैत, २०७६ Share
के गर्दै छन् इटहरीका ‘भाइरल मेयर’ ? (भिडियाेसहित) इटहरी उपमहानगरपालिका पुग्दा मेयर चौधरी राहत संकलनमा ब्यस्त थिए । लकडाउनका कारण संकटमा परेका नगरवासीका लागि राहत जुटाउन उनी विभिन्न स्थानीय अगुवालाई फोन गरिरहेका थिए २६ चैत, २०७६ Share
कोरोना हाेइन पानीसँग डराउँछन् जनता गाउँमा बालबालिका पनि पानीकै कारण बिरामी भइरहन्छन् । पानीको अभाव घारेथानीवासीले मात्र होइन, ६ नम्बर वडाभित्रै पर्ने बाक्सीखोप र वाबुंग्लाबासी पनि झेलिरहेका छन् । यी तीन गाउँमा ती सय परिवार छन् २५ चैत, २०७६ Share
राहतको अपेक्षा गरेका जनतालाई नेताको अनुहार उपहार ! छिमेकीको दीपावली ‘कपी’ गर्ने नेता, मन्त्रीले छिमेकका पदाधिकारीले तलबबाट केही रकम कटौती गरी आमनागरिकका लागि छुट्याएको कुरा भने अनुकरण गर्न किन नसकेका होलान् ? २५ चैत, २०७६ Share
राहत वितरणका नाममा तस्वीर आतंक राहत दिँदा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताले पोज पोजका फोटो लिएर फेसबुकमा पोस्ट गर्ने परिपाटी भने हास्यास्पद मात्र छैन, मानवीय संवदनाको विरुद्ध पनि छ २२ चैत, २०७६ Share
स्थानीयमा कृषिका आकर्षक नारा, ९ दिनमै भोकै भए सारा १४ दिन मुलुक लकडाउन हुँदा स्थानीय तहमा चामल र तरकारी बाँड्ने होडबाजी चलिरहेको छ २१ चैत, २०७६ Share
खानेकुराको चिन्ता छैन, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ स्थानीय सरकारले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म कोरोनाविरुद्ध कदम चालेको देखिन्छ । अन्य जिल्लासँग जोडिएका नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ २० चैत, २०७६ Share
प्रधानमन्त्रीको किचनमा 'ठग'को रजगज यस्तो संकटको घडीमा राज्यको ढुकुटी र लाखौँ नेपालीको ज्यानमाथि खेलवाड गर्न खोज्ने जोकोही भए पनि सरकारले उन्मुक्ति दिन हुँदैन । यतिबेला सक्नेजति सहयोग, योगदान गरेर मुलुकलाई क्षतिबाट बचाउन भूमिका खेलनुपर्नेमा उल्टै ढुकुटी लुट्न लाग्नेहरू देशका शत्रु हुन् १९ चैत, २०७६ Share
केहीलाई कुटाइको डर, धेरैलाई छाक टार्नै सकस यो सरकारको बाध्यकारी कदम भए पनि लकडाउनको सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । खासगरी बजार क्षेत्रमा दिनभर काम गरी बेलुका छाक टार्ने वर्ग समस्यामा परेको छ १८ चैत, २०७६ Share
१८ घण्टासम्म अस्पतालमा भोकै रुँदै बस्यौँ पूरै शरीर ढाकेको मान्छे आयो । मेरो छोरा र बुहारीलाई एम्बुलेन्समा हालेर लग्यो । मेरो छोरा ३/४ दिनदेखि टोलाएर मात्र बस्थ्यो । गाउँभरी चलेको हल्लाले ऊ निकै कमजोर भएको थियो । हल्ला चलेजस्तो उसलाई ज्वरो आएको थिएन, ऊ स्वस्थ्य थियो १६ चैत, २०७६ Share
निको भए कोरोनाका १ लाख ३३ हजार बिरामी राहतको खबर पनि छ । अहिलेसम्म १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी बिरामी निको भएर घर फर्केका छन् । जबकि, संसारभर संक्रमितको संख्या ५ लाख ९७ हजार २ सय ७६ जना छ । १५ चैत, २०७६ Share
कोरोनाभन्दा भयङ्कर महामारीकी साक्षी विभिन्न महामारी फैलिँदा कहिले पहाडको मान्छे तराईतिर भाग्थे, कहिले तराई छाडेर पहाडतिर चढ्थे । तर, मान्छेचाहिँ धेरै नै मर्थे । औलोको महामारी चलेका बेला हामी पनि दुई पटक बसाइँ सरेका थियौँ १४ चैत, २०७६ Share
घरमै बसेर देश जोगाउने समय यस्तो समयमा हामीले आफ्नो प्रदेश र केन्द्र सरकारमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले बेलैमा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैयौं खालका सतर्कता अपनाएका छन् । अब सतर्कता अपनाउने पालो तपाईं हाम्रो हो । त्यसैले आफू पनि बँचौ, अरूलाई पनि बचाऔँ १२ चैत, २०७६ Share
कोरोना भाइरस : कोसी टप्पुमा जे देखियो शहर बजारमा जस्तो यो क्षेत्रका स्थानीय भेला हुँदा कोरना भाइरस चर्चाको विषय हुँदैन । किनकि, उनीहरू यो भाइरसको विषयमा पूर्ण जानकारी नै छैन १० चैत, २०७६ Share
कोरोना परीक्षणः कहिलेसम्म धान्ने टेकुका ल्याबले ? कोरोना हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न टेकुको विकल्प छैन । सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन ल्याउन किन चासो देखाइरहेको छैन ? धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् ६ चैत, २०७६ Share